Sidee Qofku Ku Noqdaa Mid Baqli Badan | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan, September 30, 2015
Abshiro Axmed Cabdi — November 4, 2019
1– Qodobka ugu muhiimsan ee caaqil lagu noqdo waa awoodda lagu sawirayo iyo qorshaha mustaqbalka, sidaas darteed tani waxay dadka ka caawisaa in ay fahamto waxyaabaha iyo dhibaatooyinka mustaqbalka ku dhici kara, sidoo kale wuxuu furfuri doonaa adduunka oo dhan, Einstein wuxuu yiri mid ka mid ah taariikhda: (Imtixaanku wuxuu ka muhiimsan yahay aqoonta; Aqoontu waxay ku kooban tahay waxa aan ognahay hadda iyo waxa aan fahmeyno, halka runtu ay ka kooban tahay adduunka oo dhan, iyo wax kasta oo la garanayo ama la fahmi doono weligiis.
2- Aqoon kororsi: Aqoontu waxay leedahay door muhiim ah oo kor u qaadeysa awoodda maskaxeed iyo sirdoon, qof kasta waa inuu ahaadaa mid wax ku ool ah oo uu ku yeesho beertiisa iyo jacaylka aqoonta, sayniska iyo horumarinta naftiisa.
3-Helitaanka xirfadaha cusub ee bulshada: In lalo shaqayo dadka kale dugan ayaa ku heli karta dabeecado kala dugan kuna heli karta xirfad cusub. Ka lahadalka dadka kala dugan waxay kordhinkartaa fahamka aadanaha iyo sirdoonk.
4-In uu sameeyo tawaaduc: Haddii qofku rabo inuu wax badan ka ogaado noloshiisa, waa inuu is-hoosaysiiyaa oo uu dadka iskale waynaan.
5- Aamusnaanta: Aamusnaanta waa xigmad, sidaas darteed waxaa baran karta ereyada dadka kale iyo khaladaadkooda iyo waayo-aragnimadoodaba, isla mar ahaantaana farshaxanka muuqda ee la macaamilka dadka kale.
6- Isbedelka fikradaha: Qaar ka mid ah fikradaha xun ee maskaxda bini’aadamka waa inay isku beddelaan fekerada wanaagsan, tusaale ahaan, qofku wuxuu u maleynayaa inuu hore u soo maray, tani waa khalad. sababtoo ah qofka caqliga leh wuxuu ogaanayaa in mustaqbalka la qorsheynayo.
Imtixaanku waa qayba ka mid ah tilaabooyinka lagu tijaabiyo ardayga aqoontiisa inta lagu gudajiro xilliga waxbrashada.
Guusha nololeed ee cilmi-nafsiga waa talaabada koowaad ee ardaygu uu noloshiisa ku bilaabayo si sax ah, si uu u noqdo qof bini’aadam ah oo qiimo iyo miisaan ku leh bulshada uu la noolyahay, Guulaha ma fududa lakin qofki daneeyo way u fududahay.
Guushu waxay u baahan tahay dadaal si loo gaaro gaban gabada. gaar ahaan marka imtixaannada loogalayo, sababtoo ah waxay go’aaminaysaa fahamka ardayga maadooyinka uu dhiganayey sannadkaas.
Talaabooyinka lagu tijaabiyo ardayga
Si ardaygu u gaaro himilada uu ku raadinayo noloshiisa waa in imtixaano lago qaado, waan inuu qaadaa talaabooyin sax ah oo ku saabsan sida loo baranayo imtixaanada: Ardaygu waa inuu diyaargaroobaa maskax ahaan marxaladda imtixaanka, oo uu leeyahay xukun ku dhisan oo aaminsan awoodiisa iyo kartidiisa, iyo inuu awoodo inuu ku guuleysto guusha la rabay, oo uu ku kalsoonaado Ilahay.
Diirada saar daraasadda oo kaliya, oo ka takhalusi fekerka dhammaan dhibaatooyinka maskaxda iyo bulsheed ee laga yaabo inay u soo gaaraan ardayga marxaladda daraasadda.
Ardaygu waa inuu helaa waqti nasasho, si uu u nasteexo jirkiisa iyo maskaxdiisa waqtiyada uu dareemayo daal. sababtoo ah daalku wuxuu maskaxda ka dhigayaa mid daciif ah oo ardaygu aan awoodin inuu waxbarashada diiradda.
Sababaha ardaydu iga baqaan
Kalsooni daro uu ku naftiis.
Ardaygu waxuu Cabsi ka qabi karaa su’aalaha lagu keeni doono imtixaanka iyo meesha ayka imaan karaan.
Ardaygu waxaa laga yaabaa in uusan imtixaanka uu san usoodiyaarin si fiican sidaa owgeeda waxuu ka cabsi qabaa in uuku dhaco imtixaanka.
Tags: Sidee Qofku Ku Noqdaa Mid Baqli Badan
Next post Wiilkii Geel Jirka Ahaa 'Qiso'
Previous post Xirfadaha Mnemonic - Sidee ku baran kartaa xirfadaan?